I-Baldisera duplex enegadi
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguEsther
Villa kwindawo ezolileyo yosapho. Imigangatho emibini ye-50m² malunga. Ngamnye unazo zonke iinkonzo eziyimfuneko.Inxalenye engezantsi yendlu ayifumaneki, sihlala siyirenta, izimele ngokupheleleyo kwindlu yonke.
Iqaqambe kakhulu kwaye iphangalele, inebalcony kunye negadi elungele izilwanyana zasekhaya. Ngokukwanjalo, kanye phambi kwe-chalet kukho ipaki enkulu eneejingi kunye neendawo ezinkulu eziluhlaza ezilungele iipiknikhi, ukuzilolonga kwemidlalo efana neyoga kunye nokudlala nabantwana.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, iisofa ezikwazibhedi eziyi-2, 1 iisofa eziyi-, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.21 out of 5 stars from 189 reviews
4.21 · Izimvo eziyi-189
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi189
Ubumelwane kukuhamba ngemizuzu eyi-10 ukusuka kumbindi we-Estella. Ubukhulu becala yenziwe ziintsapho ezinabantwana abakwiminyaka yokufunda, abadla umhlala-phantsi kunye neentsapho ezininzi ezinabantwana abangaphandle kwelizwe. Ngoko ke kuthe cwaka kakhulu, kucocekile, kukhuselekile kwaye kumnandi. Ikwanayo nevenkile enkulu (Itzuli), ikhemesti, ipaki enkulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Esther
Lonke unxibelelwano nam (umamkeli-zindwendwe) luya kuba kwi-intanethi kuba ndisebenza imini yonke eBar el Mosquito. Ukuba unyango lobuqu lubonwa luyimfuneko, ungaya kwibhari ethe C / arieta n-13, apho inkonzo yesidlo sakusasa ikwabonelelwa ukususela ngo-09:00 am;
-Ikofu okanye iColaCao okanye iJusi
-Inxalenye yekeyiki yesipontshi eyenziwe ekhaya okanye i-croissant okanye i-pintxo
-Ithuba lokulungiselela ukuhamba
Ixabiso londwendwe: € 3
Lonke unxibelelwano nam (umamkeli-zindwendwe) luya kuba kwi-intanethi kuba ndisebenza imini yonke eBar el Mosquito. Ukuba unyango lobuqu lubonwa luyimfuneko, ungaya kwibhari ethe C…
Inombolo yomthetho: UVT00610